Loris Karius Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Loris Karius Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Goal Keeper nke kacha mara amara na aha njirimara; "Kary". Anyị Loris Karius Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Loris Karius Bio gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya, ndị nne na nna ya, ibi ndụ ya, ndụ onwe ya na ọtụtụ ihe ndị gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere mma ya na nchụpụ ya Simon Mignolet mana ole na ole na-atụle Loris Karius Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ Loris Karius nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Loris Sven Karius mụrụ na 22nd nke June 1993 na Biberach an der Riss, Germany. A mụrụ ya nne ya, Christine Karius na nna, Harald Karius onye zubere nwa ya nwoke ka ọ bụrụ onye na-agba motocross.
Otú ọ dị, nna nna Loris, Karl, gbara ya ume ilekwasị anya na football. "Papa m anaghị ele football anya ma ọ bụ nna nna m dubara m n'ime ya," Karius kwuru na nyocha 2016, “Ọ bụ ya na-eburu m ọkara awa gaa ọzụzụ ụbọchị ọ bụla mgbe ndị mụrụ m na-arụ ọrụ. Ọ bụ ya kacha akwado m. ”
Loris Karius nwere ike iji obi ike gwa nna ya, Harald, na ọ gaghị na-arụ ọrụ motocross na ọ ga-agbaso nrọ ya. Nne ya Christine kwadoro ya site n'inwekwu mgbanwe ahụ.
Karius na-achọ inweta nkwado ọzọ ma gosipụta nna ya na-ezighi ezi gara Pestalozzi-Gymnasium Biberach ebe a kụziiri ya na nzuzo na ihe dị mkpa nke nchekwa. Ikike ya ịmụta ngwa ngwa dugara nna ya n'ikpeazụ nye ya ihe ịga n'ihu.
Karius gara n'ihu ịmalite ọrụ ntorobịa ya na klọb ndị a (FV Biberach, G Mettenberg, SSV Ulm 1846 na VfB Stuttgart) tupu ha emechaa ya na Manchester City na 2009.
Ilkay Gundogan nwa akwukwo akụkọ tinyere ihe omuma
Mgbe afọ abụọ gasịrị na usoro ndị ntorobịa nke Manchester City, ọ laghachiri Germany na Mainz 05 wee guzobe onwe ya dị ka onye mgbaru ọsọ nke mbụ maka akụkụ Bundesliga tupu ọ kwaga Liverpool na 2016 ebe ọ kwụsịrị ịga ihu ọma Simon Mignolet dị ka onye mgbaru ọsọ nke mbụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ọnye na-bụ Annelie Alpert? Loris Karius Lover:
Karius ekpughewo ndị nzuzo nzuzo nzuzo. Onye ogbugba ahụ malitere n'ihu ọha site na ịlụ onye nlereanya German bụ Annelie Alpert (nke dị n'okpuru).
Florian Wirtz Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Ọcha mara mma na-eme ka ihe kachasị mma ndụ nwoke na enyi ya. N'ụzọ dị mwute, ihe malitere ịgbanwe mgbe e mesịrị.
Onye nlere anya German Annelie Alpert amachaghị etu esi eleghachi anya n'azụ ngosipụta ihu ọha ya. N'ileghachi anya na ahụ ya, Karius anaghị echegbu onwe ya ma ọ bụ jikọọ na foto ahụ.
Ha abụọ kewara mgbe ha na-enweghi afọ abụọ ọ bụla n'ihi na ọ bụ onye Liverpool mara aha ya nke mere ka ọ banye n'obi ụmụ nwanyị.
Julian Brandt Child Story Story Ihe omuma
N'oge na-adịghị anya, Loris Karius dere akwụkwọ nlereanya nke ndị Britain na-agbanye na TV na-egosi na e mere TV na Chelsea.
N'oge na-adịbeghị anya, Machị 2018, onye nkwụsị German ka a gbapụrụ na-ahapụ Ogige Vegan Cafe na Hale n'ehihie na-esonyere uwe mara mma nke a na-eche na ọ bụ ihe atụ Daniella Grace.
Loris Karius Ndụ Nke Onwe:
Loris Karius bụ n'ezie ndị ịgba egwu ọkụ. O nwere àgwà na-esonụ na àgwà ya.
Ike Loris Karius: Ọ bụrụ na ị na-eche echiche nke ọma, na-eguzosi ike n'ihe, na-enwe obi ọmịiko, nwee ọmịiko ma nwee ike ime ka ụmụ nwanyị kwenye.
Ọdịdị Loris Karius: Ọ nwere ike ime ihe ọchị. Karia nke a, ịbụ onye na-enweghị nchekwube, onye na-enyo enyo, onye na-enweghị nchekasị na nke enweghị nchebe na mmekọrịta.
Ihe Loris Karius nwere mmasị: Art, ihe omume ntụrụndụ nke obibi, ịnọ ọdụ n'akụkụ ma ọ bụ na mmiri, inwe enyi nwanyị na ezigbo nri na ndị enyi
Marc-Andre Ter Stegen Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Ihe Ndị Na-emepụta Ihe
Ihe Loris Karius achọghị: Ndị mbịarambịa, nkatọ ọ bụla nke Nne bụ onye nkwado ya mere ka ọ banye n'ụgbọ elu ma na-ekpughe ndụ onwe onye.
Na nchịkọta, Karius nwere mmetụta miri emi na mmetụta. Ọ na-enwe nchekasị na nlezianya, ma na-echebara ihe gbasara mmekọrịta anya.
Tupu ewu ewu, Karius na-adịkarị mkpa maka ihe ịga nke ọma. Ọ maara na ọ nwere ọtụtụ ụzọ ọ ga - aga, ya mere, ekweghị ka ndụ nke nnukwu ndị ịgba egwu ya na ndị ọgaranya na ụgbọ ala ha na - anya metụtara gị.
Ndụ Loris Karius Family:
Loris Karius si n'ezinụlọ ndị Germany nọ n'elu-n'etiti. Isi ezinụlọ, Herald Karius bụbu onye ọkwọ ụgbọala motocross mara Germany nile maka ụbọchị ebube ya.
O di nwute, Herald nwetara otutu mmerụ ikpere ikpere n'oge ọrụ ọ ugwu. Ọ bụ nne Karius kwadoro di ya iji hụ na nke ahụ. Nke a bụ ihe mere o ji jụ nwa ya nwoke, Karius ka ọ bụrụ ịgba bọl. Dị ka Karius si tinye ya; 'Papa m eleghi anya n'egwuregwu football, o bu nna m buru onye me n'ime ọ ”.
N'ụzọ dị mwute, Karius granddad enweghị ohere ịhụ m na-egwu ọrụ. Ọ nwụrụ tupu mụ amalite. Karius na-etinye ya; 'Enwere m aha nna m na egbu egbu ma mgbe ahụ enwere m ụfọdụ ndị mmụọ ozi nchebe n'ebe ahụ. Ọ dị mwute ịhụ ka ọ na-ahapụ m, mana enweghị m ike ịgbanwe ya. Amaara m na ọ ka ga-ele m anya ka ọ ghara inwe nsogbu. '
Eziokwu Lattis Karius:
Loris Karius emeela onwe ya ka o guzosie ike n'ebe ndị okenye na-eche nche.
Kevin Volland Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkụ obi ya na-egosipụta ihe osise ọkụ ọkụ oge a na-asọpụrụ nke diamond, Roses, na otu ilo. N'etiti oke oke ma ọ bụ nnukwu ifuru osisi dị n'ubu ya, nnụnụ ọzọ, na ụzọ abụọ a na-efe efe ga-adị ka ha mapuo anụ ahụ n'azụ ya.
Aka nri ya na-aga 180 Celsius n'akụkụ nke ọzọ site na ịnabata Mickey Mouse gloves, okpokoro isi na kpakpando, na ụdị egwu BOOM onomatopoeic afụ.
Aka ekpe ya na-etinye aka n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe oyiyi okpukpe, yana onye na-ekpe ekpere na-achịkwa bicep ya, yana ihe ngosi nke eluigwe na-egosi obi nwere ọkụ, kpakpando, na ndị mmụọ ozi sitere n'aka nna nna ya n'ọtụtụ ụdị dị iche iche na-ewere aka ya. N’ikpeazụ, obere obe ga-anọdụ n’azụ ntị aka nri ya.
Karius emeela ihe a na-ahụkarị na nkà ya. Ọnwụ ya. O nwere nchikota kachasị mma nke Agba vs Black & White tinyere ihe osise maka onye na-eche nche.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụAnyị Loris Karius Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Jamal Musiala Childhoodmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke
OMG, ọnụ ọgụgụ nke stalking ebe a bụ nnukwu .. lezie anya loris.